I-China Shijiazhuang Dayang Bioengineering Co., Ltd. ikhuthele ukuthuthukisa imikhiqizo emisha muva nje. ifektri nabakhiqizi | Dayang
I-Shijiazhuang Dayang Bioengineering Co., Ltd. ithuthukisa imikhiqizo emisha muva nje. Imikhiqizo emisha ihlanganisa ukunambitheka kobuhlalu obusha obuqhumayo, imibala emisha yobuhlalu obuqhumayo, kanye nemishini ehlukahlukene ye-bolus ukukusiza ukuthi uguqule ngokushesha usikilidi ube ugwayi obuhlalu obuqhumayo.
Ukuze uthole ukunambitheka okusha kwe-pop pearl, sisanda kuthuthukisa ama-flavour amabili, okuyi-Glacier Mint ne-Ice Mint. Ingakulethela ukuphola ngezinsuku zasehlobo futhi yenze impilo yakho ibe yinhle kakhulu futhi iqabule. Yebo, umbala wayo ubuye ube muhle kakhulu oluhlaza okotshani, okwenza ubukeke uqabula kakhulu futhi uqondanisa ukunambitheka kwawo kahle kakhulu. Ukujabulela ukunambitheka kwayo kufana nokulalela izinkathi ezine zonyakaphakathi ilanga la westlife. Ngethemba ukuthi lokhu kunambitheka okusha okuluhlaza okukhanyayo kungakulethela ukubukeka okuhle.
Ngokungeziwe ekuqhumeni ubuhlalu bezinambitheka nemibala ehlukahlukene, siphinde sakha isishicileli sobuhlalu esisha esivumela ubuhlalu obuqhumayo ukuthi bulayishwe kugwayi ngokushesha. Ngokuqhubeka nokusungula izinto ezintsha kanye nokunciphisa izindleko okuqhubekayo, sisungule ipeni lokuphusha elishibhile nelisebenzayo. Imise okwepeni futhi ilula kakhulu futhi ingafakwa ebhokisini likagwayi. Ngokusungula izinto ezintsha zobuchwepheshe, kuthatha imizuzwana emi-3 kuphela ukufaka ubuhlalu obuphumayo kugwayi. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo wethu omusha ushibhile uma kuqhathaniswa, futhi uthandwa kakhulu ezimakethe zaseYurophu njengeTurkey neNetherlands. Abangane kulezi zindawo bangashesha uku-oda nokuthenga, futhi bangene emakethe ngokushesha.
Njengesaziso sangaphambili, amabhokisi esipho sikaKhisimusi akamuva enkampani yethu a-odwe amakhasimende amaningi kusengaphambili. Ibhokisi lethu lesipho sikaKhisimusi liqukethe ipusher yobuhlalu nobuhlalu obuthathu obuhlukahlukene obunambitheka. Lesi kuzoba yisipho sikaKhisimusi esingcono kakhulu ongasinika abangani bakho. Ungasitshela ukunambitheka nesitayela osithandayo, futhi singakwazi nokwenza ngokwezifiso ukukhiqizwa ngokwezidingo zakho. Sizokwenza ukusakaza bukhoma kukaKhisimusi ngo-Agasti 27. Uma unemibuzo, singaxhumana noma nini!